Etu esi achota akwukwo ihe omuma | Martech Zone
Ọ bụ ezie na otu isiokwu ma ọ bụ blọọgụ nwere ike ịpụta dịka akụkọ dị mkpirikpi, ndị ọbịa na-achọ ozi na-ahụ n'anya ịhụ ozi ahụ kachasị na usoro na-agbanwe agbanwe. Onye na-agụ otu isiokwu nwere ike iji nlezianya gụọ okwu nke ọ bụla, ahịrị nke ọ bụla na paragraf ọ bụla. Agbanyeghị, onye ọbịa nke na-achọ ihe ọmụma nwere ike ịchọ ịpịcha peeji ahụ ngwa ngwa ma wụsa ozugbo na ozi ha na-achọ ịchọta ma ọ bụ ịmụtakwu banyere.
Creatmepụta ihe ọmụma dị egwu nwere ike ọ gaghị abụ sexy, mana ọ ga-aga ogologo oge iji nyere ndị ahịa gị na-akwụ ụgwọ aka ị nweta ọtụtụ ngwaahịa gị. Ka ị nwekwuru uru ị ga-enye ndị ahịa gị, ọ ga-aka njọ ka ha bụrụ ndị ahịa lọghachiri. Colin Onye bịara ọhụrụ, HeroThemes
Colin Newcomer etinyela ọnụ ọgụgụ dị egwu, The Ultimate Ihe omuma Isiokwu Ihe omuma, yana infographic n'okpuru. Achọrọ m iji obere okwu na isiokwu ahụ wee kwuo otu ị ga - esi bulie ihe omuma gị nke ọma iji dọta ma ndị na - agụ ya na injin ọchụchọ. Ndị a bụ ndụmọdụ m kwekọrọ na nke Colin:
aha - ndị ọrụ nyocha ọchụchọ na-ejikarị ajụjụ ndị dị ka otú, ihe, wdg. M gaara aha Colin aha na infographic ka Etu esi dee akwukwo ihe omuma di nma.
Ikwu - ọtụtụ sistemụ njikwa ọdịnaya wepu okwu dị ka na or is. You'll gha acho idobe ndi no n’edemede gi permalink slug ka o ga adota na ochicho nso. Nke ahụ ga - eme ka ọnụọgụ pịa site na nsonaazụ njin nchọta ọchụchọ.
Malite na Nsogbu ahụ - yana ịmalite na nsogbu ahụ, m ga-ahụ na ị setịpụrụ atụmanya na ihe ị ga-amụta ma ọ bụ chọpụta na isiokwu ihe ọmụma. Iji maa atụ, n’isiokwu a, ị ga-amụta ya ihe ndị dị mkpa iji dee ederede ihe ọmụma dị irè, ndụmọdụ gbasara otu esi ede edemede ihe ọmụma, na otu esi achọ ya maka ọchụchọ.
Tinye Isiokwu Nke Isiokwu Maka Isiokwu Dị Ogologo - Echeghị m na ọ bụ echiche dị njọ ịtọpụ isi ihe maka edemede dị mkpirikpi ka ndị ọrụ wee nwee ike ịwụli ozugbo ozi ha na-achọ.
Isiokwu njikọta - jikọta isiokwu ndị miri emi mana hụ na ndị na - agụ akwụkwọ gị nwere ike ịnyagharịa azụ na azụ. Breadcrumbs bụ ụzọ mara mma iji mee nke a.
Jiri Nzọụkwụ Nzọụkwụ Nzọụkwụ - ma ichikota nzọụkwụ na a obi ike aha dị ka Colin mere ya infographic!
Agbaji ọdịnaya na isi - ndị a bụ isi ị ga-awụli elu nke ị nwere ike iji nọmba 3.
Iji Mkpebi mkpebi dị elu iji gosipụta ọrụ - yana usoro onyonyo, jiri vidiyo weghara ihuenyo ma ọ bụ otu-vidiyo nke ndị ọbịa gị nwere ike ịlele.
Nye Ozi Ndị Ọzọ na igbe na Ama Ama - atụmatụ, ndetu, nbudata, ịdọ aka na ntị, na ozi ndị ọzọ dị oke mma iji mee ka ndị na - agụ akwụkwọ gị pụta ìhè.
Nye isi na-amali elu na edemede ndị emetụtara - wayzọ magburu onwe maka ndị rutere ịnyagharịa na ozi ha na-achọ n'ezie results nsonaazụ ọchụchọ anaghị adịkarị mma!
Ugbu a gaa na isiokwu Colin ka ị gụọ ndụmọdụ miri emi maka nke ọ bụla n'ime ndụmọdụ ya na HeroThemes infographic:
Tags: dike gburugburuotúkbihe ọmụmanjikarịchaebuliA